Home » Creative Writing » ကျွန်မ၏ ခပ်ကြောင်ကြောင်အတွေးများ
Posted by လုံမလေးမွန်မွန် on Jul 15, 2015 in Creative Writing, Drama, Essays.., My Dear Diary | 42 comments
တစ်ခုပဲ ပြောပါ့မယ် ညီမငယ်…
သူ့ အချစ်နဲ့ အားးလပ်ချိန်တွေ ဟာ ကိုယ့် ဆီမှာ ရှိကြောင်းး သေချာ ရင် ကျန်တာ မလိုချင်ပါနဲ့တော့လေ..
ပရိုမိုးရှင်းဆိုတာမိုးက ကိုယ့် ပရောဒတ်ကို မူတည်ပြီး တားဂတ်ကွန်စူးမားတွေရှိတဲ့နေရာမှာ လိုက်ဖက် သင့်တော်သလို လုပ်ရတာမိုးရယ်…
ဥမပါ… အဲလေ ဥပမာ… ပရောဒတ်ကတော့ ကိုယ်တိုင်ပေါ့ တားဂတ်ကွန်စူးမားက အံစယာ…
ဟွန်းးးး Promotion Concert ဆိုတာမိုးက အလဂါးရ၀ူးရယ်
အချစ်ဆိုတာ ဘယ်လိုဟာလဲလို့ ဖေဖေ မသိခဲ့တာ ကြာပါပြီကွယ်
( ခုနှစ်စဉ်အလွမ်းဇာတ်ကားမှာ သုမောင်က စုလှိုင်နှင်းကို ပြောတဲ့စကား )
မသိတဲ့အတိုင်း ဆက်နေတာပဲ ကောင်းပါတယ်လို့..
ဒါနဲ့ လှည်းတန်းမှာ ပြုံးပြတိုင်း ဘယ်တော့မှ မမြင်ဘူးမို့လား..
ဟေ နီက နာ့ကို ဘယ်တုန်းကတည်းက စောင့်ကြည့်နေတာလဲ ၊
အင်းးးးး နာကလည်း ၃၀ နား နီးနေတဲ့သူတွေဆို မျက်လုံးထဲ မဝင်ဘူးကွယ် ၊ ဟီး ဟီး
မီးပွိုင့်ကူးတိုင်း ဟိုဘက်ခြမ်းမှာ လှမ်းလှမ်းတွေ့တာပါလို့စ်…
အချစ်ဆိုတာ ကျနော်တော့ တဏှာပဲ မြင်ပါတယ်။ ဟိုဟာဒီဟာကို တဏှာလို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်။
ကိုယ် အိမ်ဦးနတ်ဖြစ်လို့.. မြှောက်ပေးချင်းမဟုတ်ဘာ။
. ပြောတာနည်းလာတတ်တယ်…အဲ့တာမချစ်လို့မဟုတ်..ချစ်လွန်းလို့လို့မှတ်ပါ :))
ဒါမယ့် မိန်းခေးတွေက အရုပ်မှ မဟုတ်တာရယ်လို့စ်..
ကျမ သူ့ကို အရမ်းစိတ်တိုနေပြီ
သူက COC ဆော့သည်
ဒီမယ် ကိုနှင်းမောင် –
ရှေးခေတ်က တော့ အချစ်ဆိုတာ ခံစားစရာတစ်ခု နူးနူးညံ့ညံ့
အာ့ ပြောတာလေ .. ဒါမယ့် ဘဝအမောတွေကြားထဲ အချစ်လေးနဲ့မှ အမောပြေတာ ဟိ
ဒီမှာ ကျုပ်လုံမ ကိုယ်စား သီချင်း က ဒီ လိုရှိတယ်ကွဲ့။ ကျောက်ရုပ်ကြီး လုပ်မနေနဲ့။
လက်တွဲထားတာ၂နှစ် တောင် ရှိပြီ ဆိုတော့ Many Many Congratulations!
အဲ့သီချင်းကို တစ်လပြည့်တဲ့နေ့မှာ CD လေးနဲ့ လက်ဆောင်ပေးဖူးတယ်။ တစ်ခြားသီချင်းတွေလည်းပါတယ်။ သူ့ကို ရွာထဲလာဖို့ပြောထားတယ်။ ခုထ်ိပေါ်မလာသေးဘူး ကြည့် …
ဒုတိယဖျာရဲ့ တောင်ဘက်ဒေါင့်က သဲပွင့်လေးပေဘဲ။
အစက ဝလာတယ်လို့ ပြောရင် မဝပါဘူးတဲ့ … ခုကျ ဝိတ်ချရင်ကောင်းမားမသိဘူး ဆိုတော့ ချလေ တဲ့ … Detox ဆိုလို့ကတော့ လာထားအာဘွားပဲ ဟီဟိ
လွန်ခဲ့သော ၂နှစ်ကျော်က အခြေအနေကို ကျွန်မ ပြန်လိုချင်သည်။
သမီးက ကိုယ့်ကိုချစ်မှန်းသိတော့ ဆိုးချင်တယ် … အခုလည်း သူက ဂရုစိုက်ပါတယ် … သမီးစိတ်ကိုက ပိုလိုချင်တာ … တစ်ခါတစ်ခါ သူငယ်ချင်းတွေကို ကြည့်ပြီးအားကျတာလည်း ပါတာပေါ့ … အူးလေးပြောသလို ပြင်ဆင်နိုင်ဖို့ပဲ ကြိုးစားရမှာပေါနော် … ကိုယ်က ချစ်တာကိုး
ဟေ့ အဲ ဂလို လုပ်နဲ့ လေ။
နိ လောက် မဆိုး သေးဝူး။
မျိုးဆက်သစ်ကလေးက..ဘယ်လို..လို့.. ပုံဖေါ်ကြည့်တော့.. အေးသွက်လေးဖြစ်မလားပဲ..
Men Are from Mars, Women Are from Venus တဲ့ …
ကျန်တာတော့ ဦးလေးမပြောလို … အပေါ်က စီနီယာကြီးတွေ ဆိုမိန့်သွားပြီ…
အာ့မိုးလေးဒွေ ခလေးထိန်းရင်းနဲ့ ရေးကျိပါလားးး နောက်တာဟုတ်ဖူး အတီ
အပြစ်မပြောလိုပါ … မိန်းမတွေက အချစ်ကိုကိုးကွယ်တယ်…
မီးဖိုဆောင်မှာ ဟင်းချက်ရတဲ့ဘဝကို ပျော်မွေ့သွားပြီမို့…
အာ့ဆိုလည်း ပြန်ရင်အဲ့စာအုပ်ယူလာပီး အနော့်ပေး
အချစ်ဆိုတာ ဘဝလောက်အရေးမပါပါဘူးအမွန်ရယ်။ ဘဝတခုတည်ဆောက်မယ်ဆိုရင် နားလည်မှု့ကပိုအရေးကြီးတာပေါ့။ အချစ်ဆိုတာကြာလာတာနဲ့အမျှလုံးပါးပါးသွားပြီး ထုနဲ့ထည်နဲ့ကျန်ခဲ့ရမှာ သံယောဇဉ်နဲ့နားလည်မှု့
အလို.. မဲသွပ်ကျီး မတေဒေးပါရား… အမြံလစ်လေမှ… ဝှစ် ဝှစ်
စပရိုက်တို့ ဘာတို့ ရန်လေးဘာလေးဖြစ်လေ။ ခိခိ။ ပရိုမိုးရှင်းလေးဘာလေး ဆင်း။ ဟီး။
ကျွန်မ၏ ခပ်ကြောင်ကြောင် Comment များ
.. ဇာလေး ဈေးလာ၊ မြှာရေး တွေးခါ၊ အာမွှေး တေးသာ၊ လျှာပေး ကျွေးပါ။
၂ နှစ်တုန်းက ရေးထားတဲ့ပို့စ်..
ခုလို ၃ နှစ်ကျော် ၄ နှစ်ပြည့်ခါနီးမှာ တစ်ကျော့ပြန်လာတယ်..